नोटबुक - ब्लग - प्रकाशितः श्रावण २०, २०७४ - नेपाल
ताली बजेन भने वामदेवले मुखै खोलेर भन्छन्, ‘खोइ ताली पिटेको ?’
एमाले नेता वामदेव गौतमको आफ्नै शैली छ, हठी तर स्पष्ट । उनी नघुमाएरै सीधै आफ्ना कुरा राख्छन् । भाषण गर्दा कार्यकर्ताले ताली बजाएको उनलाई मन पर्छ । ताली बजेन भने मुखै खोलेर भन्छन्, ‘खोइ ताली पिटेको ?’
प्रदेश–५ का स्थानीय तहमा जितेका प्रमुख–उपप्रमुखका लागि एमालेले १० साउनमा नेपालगन्जमा राखेको प्रशिक्षणको सुरूमै उनले सहभागीबाट ताली मागे । कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा प्रशिक्षण उद्घाटन गर्न आइपुगेका गौतमले स्थानीय तह प्रमुखलाई अध्यक्ष वा मेयर भनेनन्, सीधै स्थानीय सरकारका ‘प्रधानमन्त्री’ भनेर सम्बोधन गरे । स्थानीय तहले पर्याप्त आन्तरिक स्रोत संकलन नहुँदासम्म तलब–भत्ता वा अरु सुविधा नलिन निर्देशन दिँदा सहभागीले ताली बजाएनन् । ‘यो कुरा मन परेन कि क्या हो ? ताली त बजेन,’ ठट्यौली पारामा प्रस्तुत भएका गौतमले थपे, ‘ताली पिट्नूस्, ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।’
अनि, गाउँ तथा नगर परिषद् उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री वा पार्टी नेता गएको पनि उनलाई मन परेको रहेनछ । आफूलाई पनि त्यस्तो निम्तो आएको तर आफू स्थानीय तहको अधिकार घटाउन नगएको उनले प्रस्टीकरण दिए । ‘ एउटा सरकारको परिषद् वा संसद्मा अर्को संसद्को नेता कसरी मुख्यमन्त्री हुनसक्छ ?’ उनले निर्देशन दिए, ‘आफ्नो परिषद्को पानस आफैँ बाल्नूस् । आफैँ मुख्य अतिथि हुनूस् ।’
वनभोज र तीर्थाटनको राजनीति
भनिन्छ, राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ । प्रस्टै बहुमत हुँदा पनि नतिजा उल्टिएका घटना छन् । सरकार बनाउन र ढाल्न सांसद खरिद–बिक्रीसम्मका घटना भएको विकृत इतिहास साक्षी छ । त्यसैले समय बितेपछि नपछुताउनका लागि पार्टीहरु जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । तिनले रात–दिन नभनेर आफ्ना उम्मेदवार जिताए । जितेपछि तिनै जनप्रतिनिधिले पुन: गाउँ–नगरपालिकामा आफ्नै उम्मेदवारलाई भोट नहाल्लान् भन्ने कत्रो चिन्ता !
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमालेले जनप्रतिनिधिलाई अयोध्या दर्शन गराए । कोहलपुर नगरपालिकामा एमालेले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई ठाकुरद्वारा लगेर राख्यो । निर्वाचित ७७ प्रतिनिधिमध्ये एमालेका ४०, कांग्रेसका ३२ र माओवादी केन्द्रका ५ जना छन् ।
बाँके जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा ४ साउनका लागि बोर्ड चुनाव तोकिएको थियो । चुनावको एक दिनअघि नै कोहलपुरमा एमालेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु खुसीयालीमा वनभोज भन्दै ठाकुरद्वारा पुगे । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एमालेबाट उपमेयर उम्मेदवार विना भट्टराईको रिसोर्टमा वनभोज गरियो । ‘नढाँटी भन्नुपर्दा त्यो सबै मत जोगाउनकै लागि थियो,’ वनभोजको अगुवाइ गरेका एमालेका एक नेता यस्तो सुनिए, ‘खसी यतैबाट लगेका थियौँ । वनभोज पनि रमाइलै भयो, यता चुनाव पनि जितियो ।’ कांग्रेसले चाहिँ आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नेपालगन्ज लगेर राखेको थियो । अर्को दिन बिहान चिया खुवाएर सीधै मतदान गर्न ल्याइएको थियो । भोट खसाएपछि मात्र जनप्रतिनिधिलाई अरुसँग भेट्न दिइएको थियो ।
डुडुवाको अयोध्या दर्शन त्यसभन्दा रोचक छ । त्यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले एमालेका पाँच भोटका लागि ठूलै कसरत गरे । कांग्रेससँग अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहित १२ जनप्रतिनिधि छन् भने संघीय फोरमले १० र फोरम लोकतान्त्रिकले ५ पद जितेका छन् । एमालेको जिल्ला नेतृत्व संघीय फोरमलाई सघाउन चाहन्थ्यो । गाउँ कमिटीले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्‍यो । कांग्रेस–एमालेको १७ र दुई फोरमको १५ मत हुने भयो ।
संख्यामा बहुमत देखिए पनि कांग्रेस–एमालेले मालती यादवको भोट क्रस हुने शंका गरे । एक भोट पनि क्रस भए, चुनाव बराबरमा जान्थ्यो । त्यो जोखिम उनीहरु मोल्न चाहँदैनथे । त्यसैले जुक्ति निकाले, १७ जनै जनप्रतिनिधि अयोध्या भ्रमणमा जाने । २ साउनमा अयोध्या गएकाहरु दर्शन गरेर मतदानअघि टुप्लुक्क डुडुवा आइपुगे । मतदान मध्याह्न १ बजेसम्म थियो । शंका गरिएकी मालती भने मतदान समय सकिएपछि मात्र गाउँ आइपुगिन् । सुरुमा त उनकै हेलचेक्र्याइले अनुपस्थित भएको भनियो । पछि रहस्य खुल्यो, अर्कै गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट जाने ठानेर उनलाई जानेरै ढिलो पठाइएको रहेछ ।
वाह रे विकासप्रेमी मेयर !
स्थानीय तह निर्वाचन सकियो । विजेता मेयर–उपमेयर काम सुरु नगर्दै हप्तौँदेखि सम्मान थाप्न व्यस्त छन् । त्यस्तै, एक सम्मान कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणा र उपमेयर उमा थापामगर–सामुन्ने पूर्वमेयर विजय गुप्ताले भावुक हुँदै भने, ‘सडक विस्तार अवरोध नेपालगन्जको विकासको कलंक हो । त्यसमा सम्झौता नगर्नुहोला ।’
स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गरेको राजपाका नेता गुप्ताको सुझाव सुनेपछि राणा पनि के कम ! कडा शब्दमा भनिदिए, ‘सदरलाइन सडक विस्तार रोक्ने घर डोजर लगाएर भत्काउँछु र बिल पठाउँछु ।’ एउटा सडक विस्तारमा यतिधेरै प्रतिबद्ध देखिएका मेयर राणा हुलाकी राजमार्गको पुष्पलाल चोक–बसपार्क खण्ड विस्तारमा भने फरक देखिए । सडक निर्माण मापदण्ड ३० मिटरको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले खुम्च्याएर २२ मिटरको बनाउने सहमति दिएको छ ।
सडक विस्तारमा घरधनीको जहाँतहीँ विरोध छ । तर, मापदण्ड भुलेर सडक साँघुरो भने कमै ठाउँमा बनाइएको छ । त्यसमाथि, विकासप्रेमी भनेर प्रचार गरिएका राणाको यो दोहोरो मापदण्ड भत्किने सूचीमा रहेका घरका धनीबाहेक अरुलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले सामाजिक सन्जालमा टिप्पणी गर्न थालिएछ, ‘वाह रे विकासप्रेमी मेयर !’
[नोटबुक] स्मार्ट ठग